Porn ကိုအမျိုးသမီးဘာသာရပ်များနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှု - Your Brain On Porn
အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များနှင့်ပတ်သက်သော porn အသုံးပြုမှုလေ့လာမှုများ
ဤစာမျက်နှာတွင် YBOP သည်အမျိုးသမီးများအားညစ်ညမ်းမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အမျိုးသမီးများအားညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသုတေသနကိုကြည့်သည်။ အချို့သောလေ့လာမှုများကအမျိုးသမီးများ၏လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကျေနပ်မှုအပေါ်အမျိုးသမီးများ၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းအများစုမှာမူ do အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုသတင်းပို့ပါ။ ဤစာမျက်နှာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချဖို့အမျိုးသမီး porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများပါရှိသည်။
မှတ်ချက် - သုတေသနကိုအကဲဖြတ်တဲ့အခါ၊ အဲဒါကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ် အားလုံး coupled အမျိုးသမီးအတော်လေးသေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း မှန်မှန် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု။ ကြီးမားသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုယ်စားလှယ် ဒေတာရှားပါးသော်လည်းအထွေထွေလူမှုရေးစစ်တမ်းကအမေရိကန်အမျိုးသမီးအားလုံး၏ ၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းသာပြီးခဲ့သည့်လက“ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်” သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် မေးခွန်းကို ၂၀၀၂ နှင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်သာမေးမြန်းခဲ့သည် ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေး, 2014)။ အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးအချို့အသက်အရွယ်အုပ်စုများမှညစ်ညမ်းမှုနှုန်းသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ တိုးပွားလာသော်လည်းအခြားလေ့လာမှုများမှနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ လေ့လာမှုအနည်းငယ်သည် (၁) တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသော (အသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံး) ဖြစ်ပြီး (၂) အမျိုးသမီးများသည်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုများစွာကလွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းဘာသာရပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းရှိ၊ မရှိမေးမြန်းခဲ့သည်။
[Update ကို: လိင်တိမ်းညွတ်လည်းညစ်ညမ်းစေရန်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည် အသုံး နှုန်းထားများ။ နမူနာအထွေထွေလူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မပါရှိလျှင်, က skewed အချက်အလက်များနှင့်ကောက်ချက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ မှ စျေးပေါလိင်, p.121 (2017)]
ဖြောင့်မတ်သောအမျိုးသမီးများ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းကသာအတိတ်ကာလကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး ၁၇ ရာနှုန်းသောမိန်းမများကသာလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသမီး ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီး ၈ ရာခိုင်နှုန်းတို့ကပြောကြားခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောခန့်မှန်းချက်အရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုအမျိုးသမီးများ၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှုန်းသည်ဖြောင့်သောအမျိုးသမီးများထက်သုံးဆပိုများသည်။ မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းသောအမျိုးသမီးများသည်ဖြောင့်မတ်သောယောက်ျားများကိုသူတို့၏ပိုက်ဆံအတွက်တောင်ပြေးကြသည်။ (တကယ်တော့သူတို့ရဲ့အတိတ်ရက်သတ္တပတ်အသုံးပြုမှုနှုန်းဟာလိင်ကွဲလိင်ခြားသူအမျိုးသားတွေထက်များတယ်။ )
သော့ချက် takeaway သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ကိုယ်စားလှယ် ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု (သို့မဟုတ်အခြား variable တွေကို) အပေါ်အပြုသဘောသို့မဟုတ်ကြားနေသက်ရောက်မှုကိုအစီရင်ခံလေ့လာမှုများနေသောအမျိုးသမီးများ၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကနေဒီဆက်စပ်မှုရယူထားပါသည်: (1) ပုံမှန်အစည်းအဝေး porn အသုံးပြုသူများနှင့် (2) ရေရှည်ဆက်ဆံရေး (အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီး၏ 3-5% ဖြစ်နိုင်သည်) ။
ဒါ့အပြင်သူက coupled အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုသူများလျော့နည်းထိခိုက်ကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, porn ၏ coupled အသုံးပြုမှု (ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအတိုင်း) အမြိုးသမီးမြားမှာပိုဘုံဖြစ်ပါတယ်။ masturbating တဲ့အခါမှာပိုပြီးအမျိုးသမီးငယ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရယူအဖြစ်သို့သျောထိုယူဆချက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခံရဖို့ပုံရသည်။ ဥပမာ,
အငယ်ဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေအနက်အတိတ်-ရက်သတ္တပတ် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတိတ်-ရက်သတ္တပတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြားဆက်စပ်မှု (သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှု) ကစစ်တမ်းများတွင်အမျိုးသမီးများ၏အသက်အကြီးဆုံးအုပ်စုသည် (အသီးသီး 0.61 vs. 0.26) တို့တွင်အဖြစ်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ခိုင်မာတဲ့ထက်ပိုပါတယ်။ [ မှစ. စျေးပေါလိင်, p.119 (2017)]
[ဒါ့အပြင်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှုမှဦးဆောင်သည်မဟုတ်။ ] အဟောင်းအမျိုးသမီးတွေထက်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများတွင်လို့ဆိုချင်ပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားပိုမိုအားကောင်းဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်။ (ဒါဟာနေဆဲလူတို့တွင်တူညီသော link ကိုထက်ဝေးအားနည်းဖြစ်ပါတယ်။ ) [ မှစ. စျေးပေါလိင်, p.116 (2017)]
မည်သည့်ကိစ္စတွင်မျှသတင်းပို့အနည်းငယ်လေ့လာမှုများနှငျ့မတူဘဲအတွက်ဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုရလဒ်များမှအမျိုးသမီး porn အသုံးပြုမှုကိုဆက်သွယ်ထားသောအများအပြားလေ့လာမှုများရှိပါသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမျိုးသမီး porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ဆက်ဆံရေးဟာမကျေနပ်မှုလျော့နည်းသွား အမျိုးသမီး.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှု (1988) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျောင်းသားများနှင့် nonstudents ဘုံ, အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်ဗလာအကြောင်းအရာ featuring ဗီဒီယိုတိပ်ခွေနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ထိတွေ့မှုခြောက်လဆက်တိုက်ရက်သတ္တပတ်အလုပ်ချိန်နာရီအစည်းအဝေးများ၌ရှိ၏။ သတ္တမရက်သတ္တပတ်များတွင်ဘာသာရပ်များလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန္ဒပြည့်တခုတခုအပေါ်မှာအပေါ်ယံသက်ဆိုင်တဲ့လေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့။ [ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း] သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုမိမိကိုယ်မိမိအကဲဖြတ်ခြင်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်ဘာသာရပ်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်များ၊ အထူးသဖြင့်ဤမိတ်ဖက်များ၏ချစ်ခင်မှု၊ ရုပ်အသွင်အပြင်၊ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဘာသာရပ်များစိတ်ခံစားမှုပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲလိင်မှတိုးမြှင့်အရေးပါပုံကိုတာဝန်ပေး။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုကျားနှင့်လူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးယူနီဖောင်းခဲ့ကြသည်။
မိသားစုတန်ဖိုးများအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာစားသုံးမှု၏ဆိုးကျိုးများ (1988) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျောင်းသားများနှင့် nonstudents ဘုံ, အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်ဗလာအကြောင်းအရာ featuring ဗီဒီယိုတိပ်ခွေနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ထိတွေ့မှုခြောက်လဆက်တိုက်ရက်သတ္တပတ်အလုပ်ချိန်နာရီအစည်းအဝေးများ၌ရှိ၏။ သတ္တမရက်သတ္တပတ်များတွင်ဘာသာရပ်များလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန္ဒပြည့်တခုတခုအပေါ်မှာအပေါ်ယံသက်ဆိုင်တဲ့လေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့။ အိမ်ထောင်ရေး, တွဲပြီးဆက်ဆံရေးကို, နှင့်ဆက်စပ်ကိစ္စများအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဖန်တီးခဲ့သည် Value ကို-of အိမ်ထောင်ရေးမေးခွန်းလွှာအပေါ်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုတစ်တသမတ်တည်းသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။
ထိတွေ့မှု, အခြားအမှုအရာတို့တွင်အကျူးများနှင့် extramarital လိင်နှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်ဖို့ nonexclusive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ access ကိုပိုမိုသည်းခံစိတ်ပိုမိုလက်ခံမှုသတိပေးခံရ။ ဒါဟာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကရာသဘာဝကဖြစ်ကြပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတျ၏ဖိနှိပ်မှုကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေကြောင်းကို၎င်းယုံကြည်ချက်တိုးမြှင့်။ ထိတွေ့မှုကဒီအဖွဲ့အစည်းအောင်, အိမ်ထောင်၏အကဲဖြတ်လျှော့ချအနာဂတ်မှာဒီထက်သိသိသာသာနည်းအလားအလာပေါ်လာ။ ထိတွေ့မှုလည်းကလေးများရှိသည်ဖို့ဆန္ဒလျှော့ချခြင်းနှင့်အထီးကြီးစိုးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျွန်များ၏လက်ခံမှုရာထူးတိုး။ အနည်းငယ်ခြွင်းချက်နှင့်အတူဤသက်ရောက်မှုသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖြေဆိုသူများအတွက်ယူနီဖောင်းအဖြစ်ကျောင်းသားများနှင့် nonstudents ဘို့ရှိကြ၏။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2004) ၏အရွယ်ရောက်လူမှုကြိုးနှင့်အသုံးပြုခြင်း - (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားခွဲခြားမရ) ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
အပေါ်အပြီးအစီးဒေတာ 531 အင်တာနက်အသုံးပြုသူ 2000 များအတွက်အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်းများကနေယူနေကြသည်။ လူမှုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အစီအမံ, ဘာသာရေးအိမ်ထောင်ရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုများပါဝင်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့် deviant ဘဝပုံစံထဲမှာပါဝင်မှု၏ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်လူဦးရေထိန်းချုပ်မှုထည့်သွင်းထားပါသည်။ တစ်ဦး Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရလဒ်များကို cyberporn ၏အသုံးပြုမှုအင်အားအကောင်းဆုံးခန့်မှန်းအကြားဘာသာရေးနှင့်တစ်ဦးပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်မရှိခြင်းဖို့အားနည်းနေဆက်ဆံမှုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ.
တောအတွင်း America Online များတွင်လိင်: အင်တာနက်ကိုလိင်အတွက်တစ်ဦးလိင်၏ရှာဖွေရေး, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားရှာခြင်းနှင့်ယင်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများ (2008) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဤသည်၏စစ်တမ်းတစ်ခုအပေါ်အခြေခံပြီး, လိင်နှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိရှာကြံဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်လေ့လာမှုခဲ့သည် 15,246 ဖြေဆိုသူ ယောက်ျား၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခုနစ်-ငါးရာခိုင်နှုန်းနှင့် 41 အမျိုးသမီးများ၏% ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြည့်ရှုအားပေးသို့မဟုတ် porn ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ရသည်။ ယောက်ျားနှင့်ဇာတ်နိမ့် / လိင်တူချစ်သူများ porn ရယူသို့မဟုတ်ဖြောင့်သို့မဟုတ်မိန်းမနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အွန်လိုင်းကတခြားလိင်-ရှာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကအချိုးကျဆက်ဆံရေးဟာညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ရလဒ်အဖြစ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားထင်ရှားခဲ့ပါတယ်, နှင့် ပိုပြီးအပျက်သဘောအကျိုးဆက်များသတင်းပို့အမျိုးသမီးများကို, ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွင်တွေ့မြင်လုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်လျှော့ချခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို, သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးပါတဲ့မိတ်ဖက်, တိုးမြှင့်ဖိအားများနှင့်လျော့နည်းအမှန်တကယ်လိင်အပါအဝင်အမျိုးသားများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုမိုအပြစ်ရှာဝေဖန်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်လိင်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းမှ Exposure နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု: တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု (2009) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
မေလ 2006 နှင့်မေလတွင် 2007 အကြား, ငါတို့အကြားသုံးလှိုင်း panel ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူ 1,052-13 အသက် 20 ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ် SEIM ထိတွေ့တသမတ်တည်းမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလျှော့ချကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Wave ကို2၌) အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလည်း (Wave ကို3အတွက်) SEIM ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ် SEIM မှထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု ကွာခြားခဲ့ပါဘူး ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြီးကောင်ပေါက်အကြား။
နော်ဝေလိင်ကွဲစုံတွဲ (2009) ၏ကျပန်းနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း
Porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ယောက်ျား၌ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့်အမျိုးသမီးအတွင်းအပျက်သဘောဆောင်သောအမြင်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုမသုံးသောစုံတွဲများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများမရှိခဲ့ပါ။ လေ့လာမှုမှကောက်နုတ်ချက်များ။
သူတို့အားအတွက် စုံတွဲများဘယ်မှာ တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသော တစ်ဦးအလိုလိုခေါ်ဆောင်သွားရာသီဥတုရှိ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲဒီစုံတွဲကပိုအလုပ်မဖြစ်ရှိသည်ဖို့သလိုပဲ.
အဆိုပါ ညစ်ညမ်းမသုံးခဲ့ဘူးတဲ့သူစုံတွဲများ..။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ၏သီအိုရီ ဆက်စပ်. ပိုမိုရိုးရာထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သူတို့ကမည်သည့်အလုပ်မဖြစ်ရှိသည်ဖို့မထင်ခဲ့ပေ။
အိမ်ထောင်သည် (2010) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၏သရုပ်ဆောင်နှင့်မိတ်ဖက်ဆက်စပ်မှု Exploring - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၏ Interpersonal ချိန်းမော်ဒယ်အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့ဖောက်ပြန်, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, အိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိမ်ရေ, အိမ်မထောင်မီလိင်နှင့်တွဲပြီးအိမ်ထောင်သည် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။ ကနေဒေတာများ 433 စုံတွဲများ အဆိုပါပံ့ပိုးမှုများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်များနှင့်အတူဆန်းစစ်နေကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အချို့သက်သေအထောက်အထားများကြောင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြံပြု ကိုယ်ပိုင်နှင့်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုများအတွက်အကုန်အကျဖြစ်ပါသည်, ညစ်ညမ်းတစ်ဦးတည်းသာအိမ်ထောင်ဖက်အသုံးပြုအထူးသဖြင့်အခါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် '' အသုံးပြုမှုနှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဦးစားပေး, အပြုအမူနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု (2011) အကြားအသင်းအဖွဲ့များ - ကောက်နှုတ်ချက်:
ဒီလေ့လာမှုမှာလူငယ်အမျိုးသမီးများ 92 လုလင်% နှင့် 50% အစဉ်အဆက် SEM အမျိုးအစားများအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုတော်မူပြီးမှကဖော်ပြခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း (SEM) အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။ ကြည့်ရှုအားပေး SEM အမျိုးအစားများ SEM အသုံးပြုခြင်းနှင့်နံပါတ်၏ကြိမ်နှုန်းနှစ်ခုလုံးကိုပုံမှန်အားဖြင့် SEM အတွက်တင်ပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အမျိုးအစားများအဘို့အမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကြောင်းအကြံပြု SEM အသုံးပြုမှုသည်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်သူများ၏လိင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကဏ္aspectsများစွာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အထူး ပိုမိုမြင့်မားသောမြင်ကွင်းကြိမ်နှုန်းလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သည် ကျားမအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်အခါ, ယာနျဘာသာတရားကို, ချိန်းတွေ့အခြေအနေနှင့်ကြည့်ရှုအားပေး SEM အမျိုးအစားအရေအတွက်က။
SEM အသုံးပြုမှုအစောပိုင်းကနှင့်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိအပြင်တိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးနဲ့ဆက်စပ်အဖြစ်နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းကြောင့်ပေါ်လာသည်။ ဤသည်ကိုပေါင်းစပ်ဦးစားပေးများနှင့်အတွေ့အကြုံများတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားရှိခြင်းရှိနေသော်လည်းမကြာခဏ SEM သုံးပြီးတစ်ဦးချင်းစီမည်သို့ပင်ဆိုစေလျော့နည်းသည်ဤအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျေနပ်မှုရှိပါသလဲ, ထိုဖော်ပြသည်။
မိန်းမတို့အဘို့, SEM ကြည့်ရှုကြိမ်နှုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းသာဖြစ်ခဲ့သည်မခံခဲ့ရ ဆိုနိုင်သည်အပျက်သဘောဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်း။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆုတ်ယုတ် SEM ကြည့်ရှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အထူးခြားကြည့်ရှုအားပေး SEM အမျိုးအစားအရေအတွက်ကနှစ်ဦးစလုံးသုံးဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကို variable တွေကိုခန့်မှန်းကြောင်း။ ထင်ရှားပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး (အထူးသဖြင့် '' kinky လိင် '' subscale နှင့်အတူ) ဤအားကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး SEM ၏လေးလံသောစားသုံးသူမကြာခဏ SEM အတွက်ပုံဖော်သူတို့အားအလားတူလိင်ကိစ္စဦးစားပေးကိုင်ကြောင်းညွှန်ပြ (ဥပမာ, Jensen & Dines, 1998; Krassas et al, 2003; Menard & Kleinplatz, 2008 ။ )
တစ်ယောက်တည်းသို့မဟုတ်အတူတကွလိင်-အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများကြည့်ရှုခြင်း: ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး (2011) နဲ့အသင်း - ကောက်နှုတ်ချက်:
ဒီလေ့လာမှုကတစ်ဦးကိုကျပန်းနမူနာများတွင်ကြည့်ရှုလိင်-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း (SEM) နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားအသင်းအဖွဲ့များစုံစမ်းစစ်ဆေး ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက် 1291 တစ်ကိုယ်ရေတစ်ဦးချင်းစီ။
သာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုအားပေးသူများသည်ပိုပြီးအပျနှံများနှင့်တစ်ဦးတည်း SEM ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုထက်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ SEM ကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှသူကိုတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးတည်း SEM ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုထက်အားလုံးညွှန်းကိန်းအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဆကျဆံရေးအရည်အသွေးကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ SEM ကြည့်ရှုအားပေးသာ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူကကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှသောသူတို့အားအကြားတစ်ခုတည်းသောခြားနားချက် ကကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှသောသူတို့အားဖောက်ပြန်၏အောက်ပိုင်းနှုန်းထားများရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်၏ Correlate, ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (2012) အဖြစ်သူတို့အမျိုးသားရိုမန်းတစ်အဖော်ရဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု Young ကအရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးများအစီရင်ခံစာများ - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမိမိတို့၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ် 308 ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကောလိပ်ကျောင်းမိန်းမတကာတို့ထက်ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းအပေါ်, အကြိမ်ရေများနှင့်ပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ရလဒ်များညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့အထီးမိတ်ဖက်ရဲ့ကြိမ်နှုန်းအမျိုးသမီးရဲ့အစီရင်ခံစာများအဆိုးသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရညျအသှေးနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်ထင်ရှား။ ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုသဘောထားအမြင်အဆိုး Self-လေးစားမှု, ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေး, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်.
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့် One ရဲ့ Romantic Partner (2012) ကိုအားနည်းစေကတိသစ္စာ: နောက်ဆုံးမဟုတ်ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကမေတ္တာ
လေ့လာမှုကဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန် ၃ ပတ်ကြာကြိုးစားခဲ့သည်။ အုပ်စုနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုဆက်လက်အသုံးပြုသူများသည်ကြဉ်ရှောင်ရန်ကြိုးစားသူများထက်ကတိက ၀ တ်ပြုမှုအဆင့်နိမ့်ကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
သင်တန်းသားများကိုခဲ့ကြသည် 367 တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ (300 အမျိုးသမီး) တစ်မိသားစုဖှံ့ဖွိုးတိုးသင်တန်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသင်တန်းအကြွေးများအတွက်လေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးအရှေ့တောင်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကနေ။ သင်တန်းသားများကို 17 တစ်ဦးပျမ်းမျှအသက်အရွယ်နှင့်အတူ 26 ထံမှ 19 မှအသက်အရွယ်အတွက်အရွယ်ရှိကာလိင်ကွဲ, ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
လေ့လာမှု 1 တွေ့ရှိခဲ့ ပိုမိုမြင့်မားသောညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအောက်ပိုင်းကတိကဝတ်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်
လေ့လာမှု3သင်တန်းသားများကိုကျပန်းဖို့တာဝန်တစ်ခုခုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရာမှတစ်ခုသို့မဟုတ် Self-ထိန်းချုပ်မှုအလုပ်တခုကိုမှရှောင်ကြဉ်ခံခဲ့ရသည်။ T ကညစ်ညမ်းသုံးပြီးဆက်လက်သူကိုရေပိုက်ထိန်းချုပ်မှုသင်တန်းသားများကိုထက်ကတိကဝတ်၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လေ့လာမှု5တွေ့ရှိခဲ့ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဖောက်ပြန်ဖို့အပြုသဘောဆက်စပ်ခဲ့တာနဲ့ဒီအသင်းအဖွဲ့ကတိကဝတ်ကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားရလဒ်များကိုတစ်တသမတ်တည်းပုံစံ (လေ့လာမှု 1) Cross-Section (လေ့လာမှု 2) အပါအဝင်ချဉ်းကပ်မှုအမျိုးမျိုးသုံးပြီး, (လေ့လာမှု 3) စူးစမ်း, စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်နှင့်အမူအကျင့် (လေ့လာရေး4နှင့် 5) ဒေတာ။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Exposure နှင့် Extramarital လိင်ဆီသို့အမျိုးသမီးများသဘောထား: တစ်ခုကစူးစမ်းလေ့လာရေးလေ့လာမှု (2013) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ယခုလေ့လာမှုတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမေရိကန်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာခဲ့သည် အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း (GSS) ကထောက်ပံ့ပေးဒေတာကိုသုံးနိုင်သည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကြည့်ရှုနှင့်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ extramarital လိင်သဘောထားတွေအကြားတစ်ဦးကအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်၏သာယာဝပြောမှုအမျိုးမျိုးတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုဆန်းစစ်ရန်အထွေထွေလူမှုရေးစစ်တမ်းမှအစဉ်အမြဲလက်ထပ်ခဲ့သောအရွယ်ရောက်သူ ၂၀,၀၀၀ ၏အချက်အလက်များ။ ကျွန်တော်တို့သည်အတိတ်တစ်နှစ်အတွက် X-rated ရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သူလူကြီးများကွာရှင်းခံရဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်တစ်ခု extramarital ကိစ္စဖူးဖို့ပိုဖွယ်ရှိတွေ့နှင့်၎င်းတို့၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်ခြုံငုံနှင့်အတူပျော်ရွှင်ဖြစ်ခြင်းအစီရင်ခံရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိ။ ငါတို့သည်လည်းယောက်ျားအဘို့, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို၏ကြိမ်နှုန်းအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုလျှော့ချကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဘာမှမပါလျှင်ကျွန်တော်ညစ်ညမ်းနှစ်ဦးစလုံးကိုပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကာလအတွင်း, အချိန်ကျော်ပိုမိုအားကောင်းစိုက်ပျိုး, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေးသုခချမ်းသာအကြားအနုတ်လက္ခဏာဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကျနော်တို့လိင်, အသက်, လူမျိုး, ပညာရေးနှင့်သားသမီးများ၏အရေအတွက်ထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုဆင်တူတည်ကြသည် ဖြစ်. , ကျနော်တို့ဘာသာရေးတက်ရောက်သူ၏ကြိမ်နှုန်းအဘို့အထိန်းချုပ်မှုပါဝင်သည်အခါသူတို့အကြောင်းကိုသုံးပုံတစ်ပုံအားဖြင့် shrank ။
အမြိုးသမီးမြားအဘို့, ကိန်းများအားလုံးအတူတူပင်နိမိတ်လက္ခဏာရှိပေမယ့်လူတို့သညျထိုထက်ပြင်းအားအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်ခဲ့ကြ။ ညစ်ညမ်း အသုံးပြု. သတင်းပို့တဲ့အမျိုးသမီတစ်ဦး extramarital ကိစ္စခဲ့ပွီး၏ 10% ပိုမိုမြင့်မားလေးသာမှု, အလွန်ပျော်ရွှင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရှိခြင်းအစီရင်ခံ, မိမိတို့ဘဝနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းကို 95% နိမ့်လေးသာမှု၏ 8% နိမ့်လေးသာကွာရှင်းခံရ 2% ပိုမိုမြင့်မားလေးသာခဲ့ ခြုံငုံ
အမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြား relational လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ညစ်ညမ်းလက်ခံမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များ (2014) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
တစ်နမူနာအသုံးပြုခြင်း 792 ထွန်းသစ်စလူကြီးများ, လက်ရှိလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ လက်ခံခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုပေါင်းစပ်ပြီးစစ်ဆေးခြင်းသည်ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်ပုံကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်လက်ခံမှုပုံစံများတွင်ကျား၊ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုမြင့်မားခြင်းနှင့်အန္တရာယ်မြင့်မားသောအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ မြင့်မားသောအမျိုးသမီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆက်ဆံရေးအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ဆက်စပ်မခံခဲ့ရခြင်းနှင့်အပျက်သဘောစိတ်ကျန်းမာရေးရလဒ်များနှင့်အတူယေဘုယျဆက်စပ်ခဲ့သည်။
Landripet, အိုင်ဗင်; Štulhofer, Aleksandar; Jurin, Tanja (2014)
AbstractsDubrovnik ၏ IASR လေးဆယ်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးစာအုပ်
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု; ညစ်ညမ်းစွဲ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်; Hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire; Erectile အလုပ်မဖြစ်
Dubrovnik, Hrvatska, 25. -28 ။ 2014 lipnja ။
မကြာသေးမီအကြီးစား epidemiological လေ့လာမှုတစ်ဦးကစုံတွဲတစ်တွဲသည်လုလင် (။ , မာတင် 2012 Mialon et al, 2010) ကြားတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ခုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားတဲ့ပျံ့နှံ့ဖို့ထောက်ပြသည်။ ဒါဟာဒီ "ကပ်ရောဂါ" အလွန်အကျွံအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုရှင်းပြခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အလားတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုများပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလိုငွေပြမှု၏သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားမှတုန့်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီ။ မျက်မြင်လက်တွေ့ညစ်ညမ်းစနစ်တကျစည်းမျဉ်းများအတွက်မကြာသေးမီကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်ဂယက်ရိုက်စေပါတယ်သောဤတောင်းဆိုချက်များ, အကဲဖြတ်ရန်ကျနော်တို့စူးစမ်း: ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှု (SD) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်လျှင်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတစ်ခုတိုးလာအကြိမ်ရေ SD ကသူနဲ့ဆက်စပ်နေသည်လျှင်, နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားအသင်းအဖွဲ့ညစ်ညမ်းအမျိုးအစား (တိကျတဲ့ / paraphilic contents တွေကို vs. ခေတ်ရေစီးကြောင်း) ကတည်းဖြတ်လျှင်။
သင်တန်းသားများကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ပြီးသတင်းနှင့်ချိန်းတွေ့သောဝက်ဘ်ဆိုက်အတော်များများတွင်တင်ထားသည်။ စုစုပေါင်း 4, 597 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည် (18-60 yrs; ပျမ်းမျှအသက် = 31.1; 56.5% အမျိုးသမီးများ) ။ ၅၆.၃% ကကောလိပ်ပညာရေးနှင့် ၃၈.၄% သည်လက်ထပ် / အတူနေထိုင်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်း၊ ထိုကာလအတွင်းပုံမှန်နေ့၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသောအချိန်နှင့်သူတို့၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှု၏ပြင်းထန်မှုကိုညွှန်ပြသည်။
သို့သော်တိုးလာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအနည်းငယ်ပေမယ့်သိသိသာသာနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည် အမြိုးသမီးမြားအကြားပူးပေါင်းလိင် (နှင့်ပိုပြီးပျံ့နှံ့နေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု) အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းသွား.
ဘာ၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအသုံးပြုသူများ (2015) အကြားရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဘာအသုံးပြုမှုနှင့်အခက်အခဲများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းအချက်များ - ကောက်နုတ်ချက်:
ဤလေ့လာမှုကျဘာစွဲစမ်းသပ်မှု, ညစ်ညမ်းမေးခွန်းလွှာဘို့တဏှာနှင့် 267 သင်တန်းသားများအကြားနွေးထွေးမှုအပေါ်တစ်ဦးမေးခွန်းလွှာကိုအသုံးပြု (192 အထီးနှင့်အ 75 အမျိုးသမီးအင်တာနက်ဆိုသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆိုက်ဘာဆက်နွယ်မှုကိုအထူးရည်ညွှန်းသည့်အထူး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှစုဆောင်းခံရသောအမျိုးသား ၂၈ နှစ်နှင့်အမျိုးသမီး ၂၅ နှစ်တို့၏အသက်ဖြစ်သည်။ ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရလဒ်များကြောင့်ညစ်ညမ်း, ကျား, မ, နှင့်နွေးထွေးမှုအတွက်ဘာသိသိသာသာဟောကိန်းထုတ်အခက်အခဲများညွှန်ပြခြင်းနှင့်ကရငျးနှီးမေးခွန်းလွှာအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ကှဲလှဲ၏ 66.1% အဘို့မှတ်။
ဒုတိယအချက်မှာဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လည်းရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်းအတွက်ညစ်ညမ်း, ကျား, မ, နှင့်အခက်အခဲများအဘို့ဘာအသုံးပြုမှုသိသိသာသာဟောကိန်းထုတ်အကြိမ်ရေစွဲလမ်းကြောင်းညွှန်ပြ ထိုသို့ဘာအသုံးပြုမှု ratings အတွက်ကှဲလှဲ၏ 83.7% အဘို့မှတ်။
တတိယအချက် လူတို့သညျအမြိုးသမီးမြားထက်အမျိုးသမီးများနှင့်ညစ်ညမ်းဘို့တဏှာ၏မြင့်မားရမှတ်ထက်ဘာကို အသုံးပြု. ၏ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားရမှတ်များရှိခဲ့ခြင်းနှင့် အဘယ်သူမျှမမြင့်မားရမှတ်များ မေးခွန်းလွှာအပေါ်အမျိုးသမီးတွေထက်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးမျိုးဖွဲ့စည်းအတွက်အခက်အခဲများတိုင်းတာခြင်း။
မေတ္တာနှင့် Birjand, အီရန် (2015) တွင်လက်ထပ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းနှင့်အတူအိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှု၏ relationship - ကောက်နှုတ်ချက်:
ဤသည်ဖော်ပြရန်-ဆက်စပ်မှုလေ့လာမှုကျပန်းခွဲတမ်းနမူနာနည်းလမ်းကိုသုံးပြီး 310-2012 ပညာသင်နှစ်အတွက် Birjand တွင်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူတက္ကသိုလ်များမှာလေ့လာနေ 2013 လက်ထပ်ကျောင်းသားများကိုအပေါ်ကောက်ယူခဲ့သည်။
နိဂုံး: ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အိမ်ထောင်ရေးကျေနပ်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ပုံရသည်။ အိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှု၏ခြုံငုံဆိုလိုရမှတ်မရှိသိသာကျား-ခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်။
Cyberpornography: အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်း, ခံစားစွဲ, လိင်စွမ်းရည်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (2016) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို psychosexual ရလဒ်များဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အဆင်တူ။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့အတွက်အနုတ်လက္ခဏာ psychosexual လည်ပတ်ကြည့်ရှုလေ့လာ နှစ်ခုလုံး အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ။
ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာဒိုင်းနမစ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှု (2016) - ကောက်နှုတ်ချက်:
သင်တန်းသားများကို 75 အထီး (25%) ထည့်သွင်း နှင့် 221 အမျိုးသမီး (75%) အသက် 18-87 နှစ်ပေါင်း
ပိုများသောအထူးသ, အသုံးပြုသောဘယ်သူမျှတစ်ဦးချင်းစီသည်အသုံးပြုသူများခဲ့သောသူတို့ကိုစုံတွဲများထက် ပို. ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအစီရင်ခံဘယ်မှာစုံတွဲများ,။ ဤသည် (ယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Cooper et al ။ , 1999; Manning, 2006), အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းရလဒ်များကို၏တိုက်ပိတ်အသုံးပြုမှုကြောင့်ဆန္ဒပြနေသော။
ကျား, မသက်ရောက်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်ကျင်းပနှင့်အတူ, တစ်ဦးချင်းစီသည်အသုံးပြုသူများသည် non-အသုံးပြုသူများနှင့် shared အသုံးပြုသူများသည်ထက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးသိသိသာသာလျော့နည်းရငျးနှီးမှုနှငျ့ကတိကဝတ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
relationship အရည်အသွေးကိုကျူးလွန်ဆက်ဆံရေး (2016) တွင်တရုတ်လိင်ကွဲယောက်ျားမိန်းမတို့အကြားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများခန့်မှန်း - တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
တရုတ်နိုင်ငံတွင်တည်ငြိမ်မိတ်ဖက် (ဆိုလိုသည်မှာချိန်းတွေ့သို့မဟုတ်လက်ထပ်) နဲ့သုံးရာလေးဆယ်လေးသင်တန်းသားများအပါအဝင်လေ့လာမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူစေတနာ့ဝန်ထမ်း 178 ယောက်ျားနဲ့ 166 အမျိုးသမီးများကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် 29 ပြည်နယ် / တိုင်းဒေသကြီးများမှ။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ OSAs နှင့် OSAs အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တည်ငြိမ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမချက်ချင်းအချက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်တစ်အာရုံနှင့်အတူသန္နိဋ္ဌာန်ဆက်ဆံရေးအတွက်တရုတ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများ၏အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (OSAs) ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ နီးပါးပါဝင်သူများထဲမှ 89% သူတို့တစ်တွေကို real-ဘဝလက်တွဲဖော်ခဲ့လျှင်ပင်အတိတ်ကာလ 12 လအတွင်း OSA အတွေ့အကြုံများကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
အဖြစ်အနိမ့်တဲ့ဆကျဆံရေးစိတ်ကျေနပ်မှု, မလုံခြုံပူးတွဲမှုနှင့်အပျက်သဘောဆက်သွယ်ရေးပုံစံများအပါအဝင်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌နိမ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးအရည်အသွေး, နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမိုမကြာခဏ OSAs အတွက်စေ့စပ်, ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် dyadic ကျေနပ်မှုသိသိသာသာအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအကြား OSAs ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ယေဘုယျအားကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအော့ဖ်လိုင်းဖောက်ပြန်လွှမ်းမိုး variable တွေကိုလည်းအွန်လိုင်းဖောက်ပြန်သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ပြောင်းလဲမှုများကို“ ထိန်းချုပ်ထား” သည်နှင့်တပြိုင်နက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုအကြားဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းစာရေးသူများကသူတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုစိတ္တဇဆန်ဆန်ဖော်ပြရန်ကြိုးစားသည်။ အဖြစ်မှန် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုအရ porn အသုံးပြုမှုနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှုအပိုင်းမှကောက်နုတ်ချက် -
ဘို့ နှစ်ခုလုံး ယောက်ျားနဲ့ အမျိုးသမီးများ, သိသာထင်ရှားသော, သေးကျိုးနွံ အနုတ်လက္ခဏာသုညယူမှုကို SEM အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအကြားဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် SEM အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းညွှန်ပြကျားမကိုဖြတ်ပြီးအောက်ပိုင်းဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။
အမျိုးသမီးလိင် (2016) ရက်နေ့တွင်ပျော့ core ကိုညစ်ညမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဒီအရာအတွက် cross-section လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ် 200 လိင်တက်ကြွအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးလိင်၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ဖုံးအုပ်နေတဲ့ Self-ဖြည့်ဆည်းမေးခွန်းလွှာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုထိခိုက်စေသိမဆိုရောဂါလက်မှလွတ်ကြ၏။ စုစုပေါင်း 52 အတွက်သင်တန်းသားများကို၏% နှင့်သူတို့၏ခင်ပွန်း၏ 59.5% အပြုသဘောစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
51.6% ဟာသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်း၏ '' သဘောထားကိုပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့သည်သော်လည်း၎င်းတို့၏ခင်ပွန်း၏အပြုသဘောဆောင်သည့်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြကြောင်းသတိပြုမိခဲ့ကြတဲ့သူသင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးစုစုပေါင်း 77%, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု (စိတ်ကျရောဂါ, မနာလို) ကြုံနေရသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ non-စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်သူတို့၏ counterparts တွေကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝကိုပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှုရှိကြ၏။ ပျော့-Core ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အင်္ဂါဇာတ်ချောဆီအရည်ကြည်, အော်ဂဇင်ရောက်ရှိဖို့စွမ်းရည်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအပေါ်တစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းက coital ကြိမ်နှုန်းအပေါ်အဘယ်သူမျှမကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ပျော့-Core ညစ်ညမ်းအကဲခတ် relational အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်းတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝသက်ရောက်သည်။
ဖိလစျအိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးချင်း (2016) ၏အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးကတိသစ္စာ - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
တစ်ဦးကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစစ်တမ်းမှဖြန့်ဝေခဲ့သည် 400 ဖိလစ်ပိုင်ညစ်ညမ်းကြည့်နေကြကြောင်းလက်ထပ်တစ်ဦးချင်းစီရှိနသောသူတစ်ဦးချင်းစီနဲ့လက်ထပ်မရွေး Quezon စီးတီးတွင်နေထိုင်ကြသူကအင်တာနက်ပေါ်မှာ။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးကတိကဝတ်မှများစွာသောဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ညစ်ညမ်းများအသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းမှဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဒါကွောငျ့ဒီ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်များ၏ဆက်ဆံရေးအားနည်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ အရေးဆိုမှု၏ဆက်စပ်မှုထွက်ရှာရန်, သုတေသီများဖိလစ်ပိုင်လက်ထပ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ဆက်ဆံရေးကတိကဝတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဆက်ဆံရေးစူးစမ်းဖို့ရည်ရွယ်။ ထိုသို့ထင်ရှားနေသည် အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလက်ထပ်ဖိလစျစုံတွဲများ၏ဆက်ဆံရေးကတိကဝတ်တခုတခုအပေါ်မှာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းအွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်ကာတည်မငြိမ်ဆက်ဆံရေးဦးဆောင်သောဆက်ဆံရေးမျိုးကတိကဝတ်အားနည်း။ ဤသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဖိလစ်ပိုင်လက်ထပ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ဆက်ဆံရေးကတိကဝတ်အပေါ်တစ်ဦးအမည်ခံအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤစာတမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမေးခွန်းလွှာကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ကိရိယာများကိုအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုသုတေသီများတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုအတွက်ကျား, မကွဲပြားမှုဖော်ပြခဲ့တဲ့မခံခဲ့ရပါ။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
772 သင်တန်းသားများကို သို့ဖြစ်. , စုစုပေါင်း (အမျိုးသမီး = 390, 50.5%; အထီး = 382, 45.5%) အသက်အရွယ် 18 နှင့် 54 အကြားခဲ့ကြသူအနောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်
လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်အနောက်အဇာဘိုင်ဂျန်-အီရန်နိုင်ငံမှာကွာရှင်း-မေးအမျိုးသမီးများအကြားညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏စစ်တမ်း: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2017) - ကောက်နှုတ်ချက်:
စုံတွဲများအကြားကွာရှင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာပြဿနာများ၏ဖြစ်ပွားမှုထိခိုက်အချက်များတစ်ခုမှာလိင်ကိစ္စနှင့်အိမ်ထောင်ရေးအပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်းညစ်ညမ်းနေတဲ့အပြုသဘောဒါမှမဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာလမ်းတစ်ခုခုကိုအတွက်ကွာရှင်းကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, သံသယပေါင်းများစွာကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုကွာရှင်း-တောင်းဆိုနေတာ Urmia, အီရန်အတွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်။
ကောက်ချက်: လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို, အဘယ်သူသည်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုရမှတ်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုစောင့်ကြည့်မြင့်မားမှုနှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိလေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံပြီး, အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလယ်ပြင်၌ရှိသောမိသားစုပညာရေးနှင့်အကြံပေးခြင်းအစီအစဉ်များမှသတိထားရမှာကပိုအသီးအနှံများဖြစ်လိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအမြင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု: တစ်ဦးက quadratic အားသုံးသပ်ခြင်း (2017) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ဤဆောင်းပါးသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1,500 အမေရိကန်လူကြီးများ၏စစ်တမ်းတစ်ခုကနေရလဒ်တွေကိုတွေ့ရမယ်။ quadratic ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတစ်အများစုနေထိုင်ပြီးအနှုတ်လက္ခဏာ, ခွက်အောက်ဖက်ကွေး၏ပုံစံအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြားတစ်ဦး curvilinear ဆက်ဆံရေးမျိုးညွှန်ပြ။ အဆိုပါ curvilinearity ၏သဘောသဘာဝ ပါဝင်သူများ၏ကျား၊ မဆက်ဆံရေး၊ သို့မဟုတ်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှု၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုနှင့်မတူပါ.
တစ်လသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတစ်ကြိမ်ရောက်ရှိကြည့်ရှုခြင်းတဲ့အခါမှာအားလုံးအုပ်စုများအဘို့, အနုတ်လက္ခဏာရိုးရှင်းသောတောင်စောင်းစည်းဝေးကြ၏။ ဤရလဒ်သည်ဆက်စပ်မှုသာဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးအပေါ်သက်ရောက်မှုများရှုထောင့်မွေးစားခဲ့ကြပါလျှင်သို့သျောလညျး, သူတို့ကတစ်လတစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်းစားသုံးညစ်ညမ်းစိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်လျှော့ချတစ်ကြိမ်တစ်လတစ်ကြိမ်နေရာကကြည့်ရှုအစပျိုးလေ့အကြောင်း, ကျေနပ်မှုအပေါ်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, နှင့်များ၏အကြိမ်ရေအတွက်အပိုဆောင်းတိုးကြောင်းအကြံပြုမယ်လို့ စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်အချိုးအစားမမျှပိုမိုကြီးမားလျှော့ဖို့ခဲကြည့်ရှု။
Porn Do ကြှနျုပျတို့ကိုအပိုင်းသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်, ကွာရှင်းအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု longitudinal အကျိုးသက်ရောက်မှု (2017)
ဤသည် longitudinal လေ့လာမှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမေရိကန်အရွယ်ရောက်ထံမှကောက်ယူတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်အထွေထွေလူမှုရေးစစ်တမ်း panel ကိုဒေတာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၂၀၀၆-၂၀၁၀၊ ၂၀၀၈-၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ဖြေဆိုသူများကို၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးကြိမ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုကြည့်ရှုညစ်ညမ်းတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နှင့် longitudinal ဖြစ်ကြောင်း data တွေကိုသုံးပြီးအိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပုံကိုဆနျးစစျဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကွာရှင်း၏ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကြည့်ရှုအကြား longitudinal အသင်းအဖွဲ့ခွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့နှစ်ထပ်ကွမ်းအားကောင်းတဲ့ချဉ်းကပ်အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့ကွာရှင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကြမ်းဖျင်းလှိုင်းတံပိုးအကြားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုစတင်သောသူတို့အဘို့နှစ်ဆတိုးကွောငျးတှေ့. ဒီအသင်းအဖွဲ့ဟောကိန်းထုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌မိန်းမတို့အဘို့အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းကြည့်နေစဉ်, ယောက်ျားမိန်းမတို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်သိသိသာသာကွာခြားခြင်းမရှိပါ။ ပြောင်းပြန်ကျနော်တို့ porn အသုံးပြုမှုအဆုံးသတ်ရေးကွာရှင်းတဲ့အနိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူရှိသောမိန်းမတို့အဘို့ဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ
စစ်တမ်းလှိုင်းများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစတင်အသုံးပြုခြင်းသည်နောက်လာမည့်စစ်တမ်းကာလတွင် ၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိကွာရှင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုနှစ်ဆနီးပါးနီးပါးရှိပြီးအမျိုးသမီးများအတွက် ၆% မှ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိသုံးဆနီးပါးနီးပါးရှိသည်။။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကြည့်ရှုညစ်ညမ်းခြင်း, အချို့သောလူမှုရေးအခြေအနေများအောက်တွင်, အိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်မှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပြောင်းပြန် စစ်တမ်းလှိုင်းတံပိုးအကြားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပျစဲကွာရှင်းတဲ့အနိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သာမိန်းမတို့အဘို့။
အပိုဆောင်းလည်းအစညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကွာရှင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြားအသင်းအဖွဲ့, အမေရိကန်လူငယ်များအကြားလျော့နည်းဘာသာရေးဖြစ်နှင့်သောသူတို့နှင့် သာ. ကြီးမြတ်ကနဦးအိမ်ထောင်ရေးပျော်ရွှင်မှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြတဲ့သူတွေကိုအထူးသဖြင့်ခိုင်မာသောကွောငျးဖျောပွခဲ့လေ့လာဆန်းစစ်
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများတစ်ဦးကရိုမန်းတစ်အဖွဲ့ဟာစမ်းသပ်ပါမှပိုတူသနည်း longitudinal ဒေတာများ (2017) မှသက်သေအထောက်အထားများ - ကောက်နုတ်ချက်:
ဒီလေ့လာမှုကညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအအမေရိကန်များ, ရှိသမျှမှာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏဖြစ်စေ, အချိန်ကျော်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာအဖွဲ့ဟာကြုံနေရသတင်းပို့ဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ longitudinal ဒေတာတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်များ၏ 2006 နှင့် 2012 လှိုင်းတံပိုးကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် အမေရိကန်ဘဝလေ့လာမှု၏ပုံတူ။ binary Logistic ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း 2006 အတွက်မှာအားလုံးညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးသူကိုအမေရိကန်တွေပင်ထိုကဲ့သို့သော 2012 ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းများနှင့်အခြား sociodemographic ဆက်စပ်မှုအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအချက်များအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်နီးပါးနှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိ 2006 ကရင်ခုန်စရာအဖွဲ့ဟာကြုံနေရအစီရင်ခံရန်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြ။ ဤသည်အသင်းအဖွဲ့လက်ထပ်အမေရိကန်တွေအဘို့ထက်မိန်းမတို့အဘို့နှင့်လက်မထပ်ရသေးအမေရိကန်တွေအဘို့ထက်ယောက်ျားဘို့သိသိသာသာအားကောင်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးကnalyses ထို့အပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံသား 2006 အတွက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု 2012 ကအဖွဲ့ဟာကြုံနေရသူတို့ရဲ့အလေးသာကိုဘယ်လိုမကြာခဏအကြားတစ်ဦး linear ကြားဆက်ဆံရေးပြသခဲ့သည်။
စဉ် တစ်ဦးအဖွဲ့ဟာကြုံနေရအမျိုးသမီးတွေများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသာ (34 ရာခိုင်နှုန်းကနေ 15.4 ရာခိုင်နှုန်း) ကြည့်ရှုအစောပိုင်းက porn နှင့်အတူအကြောင်းကို 23.5 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်, t ကိုတစ်ဦးအဖွဲ့ဟာကြုံနေရအထီး porn အသုံးပြုသူသူဖြစ်နိုင်ခြေကို Non-porn အသုံးပြုသူများသည် (3.5 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 22.5 ရာခိုင်နှုန်း) ၏ 6.3 ကြိမ်ကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြား Associative လမ်းကြောင်း (2017)
ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချဖို့ porn အသုံးပြုမှုကိုဆက်သွယ်ပေမယ့်, ကလည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေတစ် preference ကိုဆက်စပ်သောခံခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံ (သို့မဟုတ်လိုအပ်ပါတယ်?) လိင်စိတ်နိုးထအောင်မြင်ရန်လူမျိုးကိုစိုး porn သည်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုသီအိုရီ, လူမှုရေးနှိုင်းယှဉ်သီအိုရီများနှင့်ညစ်ညမ်း, လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်ကြိုတင်သုတေသနပြုခြင်းဖြင့်အကြောင်းကြားသဖြင့်ပဲ့ထိန်း, လိင်ကွဲအရွယ်ရောက်ပြီးပစ္စုပ္ပန်စစ်တမ်းလေ့လာမှုညစ်ညမ်းသောအမြင်ကနေတဆင့်လျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုပိုမိုမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုချိတ်ဆက်နေတဲ့အယူအဆရေးရာမော်ဒယ်စမ်းသပ်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏မူလတန်းအရင်းအမြစ်, ပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ညစ်ညမ်းများအတွက်ဦးစားပေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး၏တန်ဖိုး။ အဆိုပါမော်ဒယ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးတွေအတွက် data ကိုကထောက်ခံခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကြိမ်နှုန်းပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး၏တန်ဖိုးအပေါ်ညစ်ညမ်းများအတွက်ဦးစားပေးနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ်ညစ်ညမ်းသိနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားပူးပေါင်းမှညစ်ညမ်း သာ. နှစ်သက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး devaluing နှစ်ဦးစလုံးလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
non-လက်တွေ့နမူနာ (2018) တွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ကြိမ်နှုန်းအကြားအသင်းအဖွဲ့လေ့လာခဲ့ပါတယ်အဖြစ်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူ၎င်း၏အပြန်အလှန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ 204 လူများတစ်ဦးကနမူနာတခုအွန်လိုင်းစစ်တမ်းပြီးစီး။ ရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဆိုးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး status ကိုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အတူသိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်း, ဒါပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးလွတ်လပ်သော variable တွေကိုအကြားအပြန်အလှန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ကိုရီးယားနမူနာ (2018) တွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု
ဒါဟာသုတေသနအစီရင်ခံစာကိုရီးယားအရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးလိင်ကွဲနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကဲဖြတ်။ ကြိုတင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြား linear အသင်းအဖွဲ့အနုတ်လက္ခဏာနှင့်အရေးပါသောဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ညီမျှခြင်းတစ်ခု quadratic အသုံးအနှုန်းများ၏ထို့အပြင်မော်ဒယ်လ်မထိုက်မတန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပုံမှန်မဆိုဒီဂရီနှင့်အတူစားသုံးမှုနိမ့်ကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေစဉ်ရံဖန်ရံခါညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမြင့်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ်ဦးစလုံးအတှကျ inverted ဦးကြားဆက်ဆံရေး, ဖော်ပြခဲ့တယ်။ နောက်ထပ်အကဲဖြတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အဆင့်မြင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးအနည်းငယ်ပိုပြီးယောက်ျားများအတွက်မှတ်သားနေစဉ်ပိုပြီးပုံမှန်အစည်းအဝေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အောက်ပိုင်းစိတ်ကျေနပ်မှုအကြားအနုတ်လက္ခဏာကြားဆက်ဆံရေးအနည်းငယ်ပို, မိန်းမတို့အဘို့မှတ်သားခဲ့ပြသခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြားဆက်ဆံရေး၏သဘောသဘာဝဘာသာရေးနှင့် nonreligious လူတို့အဘို့နှင့်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်နှင့်မဆက်ဆံရေးအတွက်လူများအတွက်အလားတူဖြစ်ခဲ့သည်။
ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုမှဆက်စပ်ကြည့်ရှုခြင်းအမျိုးသမီးများနေ့ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလား? (2018) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ကျနော်တို့အထူးကြိမ်နှုန်းသိသိသာသာအဆိုးဟာ bivariate အဆင့်မှာအမြိုးသမီးမြားရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သည်ကြည့်ရှု .. ဒါ့အပြင် H1 နှင့် ပတ်သက်. ... အမျိုးသမီးတွေအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်ကြည့်ရှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြဿနာကြည့်ဆောက်လုပ်ရေးအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းပြီးအဖော် (2019) နဲ့လိင်ကွဲအမျိုးသမီး Intimate အတွေ့အကြုံများ - ကောက်နှုတ်ချက်:
ကျနော်တို့၏စားသုံးမှုပေါင်းသင်းခြင်း, United States မှာ 706 လိင်ကွဲအမျိုးသမီးတွေ (အသက်၏ 18-29 နှစ်) စစ်တမ်းကောက်ယူ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေး, အတွေ့အကြုံများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူ။ လိင်တက်ကြွခဲ့ကြသောသူအမျိုးသမီးစားသုံးသူများထဲတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့စားသုံးမှုမြင့်မားမှုနှုန်းအပေါ်မှီခိုကြီးထွားတစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းပုံရိပ်များ၏လိင်-ကြီးထွားပြန်လည်သိမ်းဆည်းနေစဉ်ညစ်ညမ်း script ၏တိုးချဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း arousal ရရှိနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအဘို့နှင့်တစ် preference ကို ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ကျော်စားသုံးမှု။ ထို့အပွငျ, ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်း script ၏ activation ထက်ရိုးရှင်းစွာညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြည့်ရှုကိုလည်းသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းနမ်းသို့မဟုတ် caressing အဖြစ်ရင်းနှီးပြုမူသောအမှုလျော့နည်းသွားခံစားအကြောင်းကိုမလုံခြုံမှုများပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
long-term ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2019) တွင်လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးထိခိုက်အခြေခံယန္တရားများ - ကောက်နုတ်ချက်:
သို့သော် SEM စားသုံးမှုအဆိုးလိင်ကွဲပေမယ့်မရလိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူတစ်ဦးချင်းစီအကြားဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကလူ့မိတ်လိုက်ရန်သက်ဆိုင်ရာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ယန္တရားများလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့် SEM နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးအခြေခံသည့်ဖြစ်စဉ်များစူးစမ်း။
ချစ်ခင်အစားထိုး: အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (2019)
တော်တော်လေးရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအခြေခံဆက်စပ်မှုများကိုရှုပ်ထွေးစေရန်စိတ္တဇကြိုးပမ်းမှုများ - ပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုစိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အထီးကျန်မှု၊ ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုလျော့နည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ဒီလေ့လာမှုမှာအရွယ်ရောက်သူ ၃၅၇ ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့ချစ်ခင်တွယ်တာမှု၊ အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၊ (စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အထီးကျန်မှုကိုလျှော့ချခြင်းအပါအ ၀ င်) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအတွက်ရည်မှန်းချက်များနှင့်သူတို့၏တစ် ဦး ချင်းစီနှင့် relational wellness ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဟောကိန်းထုတ်သည်အပြုသဘောအထီးကျန်နှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သောခံရစဉ်ချစ်ခင်ဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပြောင်းပြန်, relational စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ရငျးနှီးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။
ဆွီဒင် 2017 (2019) တွင်လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်အခွင့်အရေးများ
ဆွီဒင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်စစ်တမ်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုဆွေးနွေးထားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုသည်ပိုမိုဆင်းရဲသောလိင်ကျန်းမာရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ပိုလန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားများအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ပျံ့နှံ့မှု, ပုံစံများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ခံစားသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2019)
အကြီးစားလေ့လာမှု (n = ၆၄၆၃) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမကောလိပ်ကျောင်းသားများ (အလယ်အလတ်အသက် ၂၂ နှစ်) တွင်လိင်အရစွဲလမ်းမှုမြင့်မားခြင်း (၁၅%)၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်)၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများကိုတင်ပြသည်။ လေ့လာမှုမှာအမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများပိုများသည်။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ
စုစုပေါင်းလေ့လာခဲ့သည့်လူဦးရေအတွက်ညစ်ညမ်းမှ Self-ရိပ်မိစွဲလမ်း၏ပျံ့နှံ့မှု (n လက်ရှိအသုံးပြုသူများသည် (၏အစိတ်အပိုင်းအစုရှိနေစဉ် = 6463), 12.2% ခဲ့သည်n = 4260) ကပမာဏ 15.5% (n = 787) အဘယ်သူမျှမခြားနားချက်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အမျိုးသားကျောင်းသားများအတွက်အကြားလေ့လာသည်။
ရှားရှားပါးပါးအီဂျစ်လေ့လာမှု။ လေ့လာမှုတွင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နှိုးဆွမှုနှုန်းတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် porn ၏ရေတိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်မကိုက်ညီပါ။
လေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းသည်အိမ်ထောင်ရေးနှစ်နှင့်စာရင်းအင်းအပြုသဘောဆောင်သောဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဒါက Goldberg နဲ့သဘောတူထားတာ et al ။ 14 အဘယ်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအလွန်အမင်းစွဲလမ်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
လိင်မှုကိစ္စကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းတို့အကြားအလွန်ဆိုးဝါးသောဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အပြုသဘောဆောင်သည့်စောင့်ကြည့်သူများ၏ 68.5% သည်သူတို့၏လိင်ဆိုင်ရာဘဝကိုမကျေနပ်ကြပါ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသည် 74.6% စောင့်ကြည့်သူများ၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကိုတိုးမြှင့်ပေးသော်လည်း 61.5% ကြားတွင်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိရန်မကူညီနိုင်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကကွာရှင်းခြင်း (33.8%) ပိုမိုဖြစ်ပွားစေပါသည်။P = 0.001) ။
ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုပုံစံကိုညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုအေးစက်စေခြင်းဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ယန္တရားဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုအကဲဖြတ်ဖို့ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်တယ် အဘယ်ကြောင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုသည်ပိုမိုဆင်းရဲသောလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အမျိုးသားများရောအမျိုးသမီးများပါပါ ၀ င်သည်။ ဒါက porn အသုံးပြုခြင်းသည်လိင်တူချင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပိုမို ဦး စားပေးနိုင်ကြောင်းအကြံပြုသည် ရလဒ်အနေဖြင့်ဆက်ဆံရေးကိုမကျေနပ်မှုသည်ပထမနေရာတွင်ရှိနေပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းကိုရှင်းပြသည်ဟုဆိုကြသည်။ စာရေးသူလည်းနည်းစနစ်နှင့်ဝေဖန် တာဝန်မဲ့ ထိုကဲ့သို့သောအားဖြင့်စာတမ်းများအဖြစ်လိုလားသူလိုလားသူသုတေသနအချို့၏နိဂုံးချုပ် တေလာ Kohut နှင့် Samuel Perry။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
ယခုလေ့လာမှုတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများနမူနာမှအမျိုးသားဖြစ်နိုင်ခြေအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ အချစ်ဇာတ်လမ်းများ၌ပါ ၀ င်သူများ၏အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုအာရုံစိုက်ကာ၊ အများအားဖြင့်တွေးဆယောင်ယောင်ယန္တရားသုံးခု (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုနှိုးဆွမှု၊ အထက်သို့) ရှိမရှိဆန်းစစ်ရန် ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၌ပြထားသည့်အတိုင်းမိမိ၏လိင်ဆိုင်ရာဘဝနှင့်လိင်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စကိုလိင်စိတ်စူးစူးဝါးဖြင့်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့သည်။
အထူးသ, pမကျေနပ်သောလေ့လာမှုက (က) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပုံမှန်စားသုံးခြင်းကိုအသုံးပြုသူ၏နှိုးဆွမှုပုံစံသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအထူးသဖြင့်တုန့်ပြန်သည်၊ (ခ) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားဤပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုသည် (၅) လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်မြင့်မားသောနှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုတိုးပွားစေသည်။ ၎င်းသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့် (d) လိင်တူချင်းလက်ထပ်ခြင်းနှင့်လိင်အပျော်အပါးကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကို ဦး စားပေးသည်၊ ၎င်းသည် (င) အဖော်အဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်မည်မျှကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအပေါ်အမြင်အားနည်းစေပြီးနောက်ဆုံးတွင် (စ) relational စိတ်ကျေနပ်မှုဆိုင်ရာအမြင်များကိုလျော့နည်းစေသည်။... ။ တွေ့ရှိချက်များသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ယူဆချက်အဆက်အစပ်ကိုထောက်ခံသည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာအပေါ်သံသယချပစ် ရှမွေလသည်ပယ်ရီ၏သံသယ / မထောက်ခံအခိုင်အမာ လိင်တူချစ်သူများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှာအဆိုးဆုံးဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်အားရစေခြင်းဖြစ်သည်ဟု (လိင်တူချစ်သူများအားလိင်ဆက်ဆံခြင်းကို“ အဖြစ်မှန်” အဖြစ်ပြသခဲ့သည်) ယခုလေ့လာမှုအသစ်က
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဖျန်ဖြေသောယန္တရားများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောမေးခွန်းလွှာစကားလုံး (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှိုးဆွခြင်းမဟုတ်ဘဲနှိုးဆွခြင်းမဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်သာ ဦး စားပေးသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုလျော့နည်းစေသောအကြောင်းရင်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောဝေဖန်မှုကိုဖော်ပြသည်။
စာရေးသူသည်နောက်ထပ်လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူတစ် ဦး ၏အသုံးဝင်မှုကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်သည် မကြာခဏ - ကိုးကားတေလာ Kohut လေ့လာမှု, ပုံမှန်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများ၏ "သက်သေခံချက်" featuring:
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေညွှန်းကိန်းများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်သီးခြားတိုင်းတာမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည် (Wright et al ။ , 2017), လက်ရှိရလဒ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်သာဓကအနေဖြင့်သုံးစွဲသူများ၏ထုတ်ကုန်ထောက်ခံချက်များကိုမေးခွန်းထုတ်ရန်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည် (Kohut et al ။ , 2017).
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုohutနှင့်ပယ်ရီ နှစ် ဦး စလုံးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်တဲ့ pro-porn site RealYBOP.
အမြိုးသမီးမြားအကြားပူးတွဲမှုမလုံခြုံမှုနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်ကို Self- သတိ: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏ဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ ((2021)
ကျွန်ုပ်တို့သည် ... စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွယ်တာမှုနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္ဌာန်မိမိကိုယ်ကိုသတိရှိခြင်းတို့အကြားအများအားဖြင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများ၌မိန်းမများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကိုကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးသည့်အခန်းကဏ္foundကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရအမျိုးသမီးများသည်ရင်ခုန်ဖွယ်မိတ်ဖက်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေသည့်အချိန်တွင်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္theirာန်ကိုမိမိကိုယ်ကိုသတိဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၏လွှမ်းမိုးမှုကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဘာစွဲဆန္ဒပြည့်အယူအဆ (2014) ကရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ် - တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
ရလဒ်များပိုပြီး arousal အဖြစ် IPU rated ကြောင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့် NIPU နဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုပိုမိုတဏှာကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, တဏှာ, ပုံများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ sensitivity ကို, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှု၏လိင်စိတ်နိုးထ rating IPU အတွက်ဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်း။ တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်ကျဘာအသုံးပြုမှုအရေအတွက်ကျဘာစွဲနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။ ဤရလဒ်သည်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်လိင်ကွဲအထီးအဘို့အအစီရင်ခံသူတို့နှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏။
လိင် Active ကိုတစ်ဦးချင်း (2016) ၏အလိုက်အတွက်လိင်-Related စကားမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတို့အကြားဆက်ဆံရေး Exploring
သူတို့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွမှုနှင့်လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံသူများဟုခွဲခြားသတ်မှတ်သူ ၅၅ ဦး (28 အထီး, 27 အမျိုးသမီး; အသက်အရွယ် 28.4 ဆိုလို, SD က 10.4, အကွာအဝေး 20-69) ကိုလေ့လာမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုက၏တွေ့ရှိချက် replicates ဒီ 2014 ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှု ကြောင်းကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှ porn စွဲ၏အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ အဆိုပါလေ့လာမှုအသစ်မတူ: မဟုတ်ဘဲထိန်းချုပ်မှုမှ porn စွဲနှိုင်းယှဉ်ထက်, လေ့လာမှုအသစ် (အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုအကဲဖြတ်တစ်ဦးတာဝန်၏ရလဒ်များကိုမှတစ်ဦးလိင်စွဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်ရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ရှင်းပြချက်) ။ အဆိုပါလေ့လာမှုနှစ်ခုသော့ချက်ရလဒ်များကိုဖော်ပြထား:
အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်း သာ. ကြီးမြတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက် (တိုးလာအာရုံ) နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ရမှတ်များ။ ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုလေ့လာမှုများနှင့်အတူ aligns ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအပေါ်မြင့်မားသောသွင်းယူသူတွေထဲမှာ, ပိုနည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှစ် related ခဲ့ကြသည် သာ. ကြီး အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု။
စာရေးသူများကဤရလဒ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ“ အတင်းအကျပ်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း” သည်သာမန်အားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း (သို့) အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု (desensitization) ၏အထွေထွေထုံသွားခြင်းကိုဖြစ်စေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ နိဂုံးအပိုင်းမှကောက်နုတ်ချက် -
"ဒီရလဒ်တွေအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ရှင်းပြချက်တစ်ခုကလိင်ဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြုအမူများပြုလုပ်တဲ့အခါဆက်စပ်တဲ့နှိုးဆော်ခြင်းပုံစံပေါ်လာပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတူညီတဲ့နှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုသဘောပေါက်ဖို့ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ပိုမိုအပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူများပြုလုပ်သည့်အခါအာရုံကြောလမ်းကြောင်းသည် ပိုမို၍ 'ပုံမှန်' လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်လာပြီးလူတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်လိုချင်သောနှိုးဆွမှုကိုပိုမိုသိရှိရန်ပိုမိုအစွန်းရောက်သောလှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်လာသည်ဟုထပ်မံငြင်းခုံသည်။
အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်ကျားမမျှသက်ရောက်မှု (အထီး: M က = 20.75, SD က 46.61; အမျိုးသမီး: M က = 19.30, SD က 52.46) ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရမှတ်များပေါ်တွင်ပြသခဲ့ကြသည်နှင့်နောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်မှုအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်မဟုတ်။
ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: လက်တွေ့အပြုအမူများနှင့် neurocognitive variable တွေကို (2016) ကိုဖြတ်ပြီးအသင်း
ဘာသာရပ်များပါဝင်သည် အထီး & အမျိုးသမီး။ ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (PSB) နဲ့တဦးချင်းစီအများအပြား neuro-သိမြင်လိုငွေပြမှုပြ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဆင်းရဲတဲ့ညွှန်ပြ အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်ဦးဖြစ်သော (hypofrontality) မူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ဖြစ်ပေါ် key ကိုဦးနှောက်အင်္ဂါရပ်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
ဒီစရိုက်လက္ခဏာတွေကနေ, ကအထူးသဖြင့်သိမြင်လိုငွေပြမှုငှါ, PSB အတွက်ထင်ရှားပြဿနာတွေနဲ့ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှု dysregulation အဖြစ်နောက်ထပ်လက်တွေ့ features တွေ, ခြေရာကောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ် ... ။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာသိမြင်မှုပြဿနာများကိုအမှန်တကယ် PSB ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာလျှင်ဤမှတ်သားလောက်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်
ဘာသာရပ်များအထီး & အမျိုးသမီးပါဝင်သည်။ EEG လေ့လာမှုကိုမွှမ်းတင်ခဲ့သည် မီဒီယာ သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် ဆန့်ကျင် porn / လိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှု။ ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည် SPAN Lab မှလေ့လာမှုအောက်တွင်တလိုပဲတကယ်ချ-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ အဆိုပါကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှုများနှင့်အညီ, ဒီ EEG လေ့လာမှုလည်းအတူ correlating porn ပိုမို cue-reactivity ကိုအစီရင်ခံတင်ပြ နည်းသော ပူးပေါင်းလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒ။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် - porn ကို ဦး နှောက်ကိုပိုမိုတက်ကြွစေတဲ့သူတွေကတကယ့်လူတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာထက် porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာထက်ပိုသည်။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်လေ့လာမှုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်စိတ်နိုးထမှု” မျှသာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ 1, 2, 3, 4, 5။ ထို့အပြင်ကြည့်ရှု ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။
ပြImagesနာရှိသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများ“ Porn စွဲ” နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများ (၂၀၁၅)
ဘာသာရပ်များအထီး & အမျိုးသမီးပါဝင်သည်။ နောက်ထပ် SPAN Lab EEG (ဦး နှောက်လှိုင်း) လေ့လာမှုကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည် အထက်ပါလေ့လာမှု (သေးပါကအထက်အမည်ရှိတူညီသောအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရ) အနေနဲ့အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်မှာ“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရသောသူများ” ကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည် အနိမ့် vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်နှင့်ထိတွေ့ရန်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု။ ဦး ဆောင်ရေးသားသူနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကဤရလဒ်များကို“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲစွဲလမ်းစေခြင်း” ကိုပြောဆိုသည်။
၏အဖြစ်မှန်မှာတော့တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat (2014)vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ Prause ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်လည်းကိုက်ညီသည် BANCA et al ။ 2015။ EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်သည်းခံမှု၊ စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သည်းခံစိတ်ကိုလူတစ် ဦး ၏မူးယစ်ဆေးဝါး (သို့) လှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်မှုမှေးမှိန်လာခြင်းအဖြစ်ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဒါကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု. ငါး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူ: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Taylor Kohut မှပြုလုပ်သောဤပုံမှန်မဟုတ်သည့် ၂၀၁၆ လေ့လာမှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်စုံတွဲများအတွက်အကျိုးရှိစေသည်ဟုသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ အဆိုပါလင်မယားဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏ရိပ်မိအကျိုးသက်ရောက်မှု: ပွင့်လင်း-အဆုံးသတ်, ပါဝင်သူ-အကြောင်းကြား, "အောက်-Up ကို" သုတေသနကနဦးတွေ့ရှိချက်။ (2016)။ ပိုပြီးဖတ်ရှုဖို့ link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
1) အဆိုပါလေ့လာမှုကိုယ်စားလှယ်တစ်နမူနာငြိမ်ဝပ်ပါဘူး။ လေ့လာမှုအများစုအရ porn အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အနည်းငယ်သောညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူအမျိုးသမီးများသည် porn ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာအမျိုးသမီး 95% မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ် porn ကိုအသုံးပြု။ ထို့အပြင်မိန်းမ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်လိင်မှုကိစ္စကိုအစပြုကတည်းက (အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာ) ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုနှုန်းထားများသည်ကောလိပ်ကျောင်းသားများထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ တနည်းအားဖြင့်သုတေသီများသည်သူတို့ရှာဖွေနေသည့်ရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်သူတို့၏နမူနာကိုလွဲချော်သွားပုံရသည်။ အဖြစ်မှန် - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကြီးမားဆုံးစစ်တမ်း (အထွေထွေလူမှုရေးစစ်တမ်း) မှကဏ္ Cross အလိုက်ဒေတာ ၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းသာပြီးခဲ့သည့်လက“ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်” သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၄ မှအချက်အလက်များ။ ပိုမိုကြည့်ရှုရန် - ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေး (2014)
၂။ လေ့လာမှုက“ ပွင့်လင်းပြီးပြည့်စုံသော” မေးခွန်းများကိုအသုံးပြုပြီး၊ ထိုအခါသုတေသီများ ramblings ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်တကယ်တော့ပြီးနောက်, အဘယျသို့အဖြေကို "အရေးကြီးသော" ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏စက္ကူတွင် (လှည့်ဖျား?) သူတို့ကိုမည်သို့တင်ပြခဲ့ကြသည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်သုတေသီများသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားသောလေ့လာမှုများအားလုံးသည်ပိုမိုခိုင်မာလာခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျနည်းနာများနှင့်ညစ်ညမ်းသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောရိုးရှင်းသောမေးခွန်းများရှိခြင်းကိုပြသခဲ့သည်။ ချို့ယွင်းချက်။ ဘယ်လိုဒီနည်းလမ်းကိုဖြောင့်မတ်သလဲ?
: အများအပြားစုံတွဲများကဲ့သို့သော porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေသိသိသာသာအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု, အစီရင်ခံသည်ဤဆိုးဝါးအားနည်းချက်တွေကိုနေသော်လည်း
ညစ်ညမ်းတဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူပိုမိုလွယ်ကူ, ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ပိုပြီး arousal ပို. နှစ်လိုဖွယ်, ဒါမှမဟုတ်လိင်ထက်ပိုဝမ်းမြောက်စေပြီးဖြစ်ပါသည်
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု desensitizing သည်အောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်လိင်စိတ်နိုးထ, ဒါမှမဟုတ်အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းစေပါသည်။
တချို့ကအထူးသညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ် desensitization ဖော်ပြထားကြောင်းဆိုပါတယ်
ဒါဟာပိုပြီးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နည်းထွက်ပေါက်, ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပျော်စရာ, ညစ်ညမ်းအစစ်အမှန်လိင်ကပိုပျင်းစရာကောင်းစေသည်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်
တချို့အကြောင်းပြချက်ဤဆိုးကျိုးများကိုလေ့လာမှုအကြောင်းကိုဆောင်းပါးများတွင်ပေါ်လာခဲ့ပါဘူး။ ဦးဆောင်ရေးသားသူရဲ့ site အသစ် နှင့်သူ၏ ရန်ပုံငွေရှာမှာကြိုးပမ်းမှု အနည်းငယ်မေးခွန်းတွေတင်ပြထားတယ်။
Update ကို (2018):
ဒီ ၂၀၁၈ တင်ဆက်မှုမှာဂယ်ရီ Wilson ကဒီတေလာကိုဟွတ်လေ့လာမှုအပါအဝင်သံသယဖြစ်ဖွယ်နှင့်လှည့်စားတတ်သောလေ့လာမှု ၅ ခုနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်သည် porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
Update ကို (ဧပြီလ, 2019):
YBOP ၏ဝေဖန်မှုများကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်စာရေးသူအနည်းငယ်သည် YBOP ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူရန်အုပ်စုတစ်စုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ နီကိုးလ် Prause နှင့်တေလာ Kohut အပါအဝင်) ။ အသေးစိတ်အတွက်ဒီစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com) ကလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ရန်လိုအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု။ သင်အောက်ပါဝေဖန်မှု၌ဤစာမျက်နှာစစ်ဆေးလို့မရပါဘူးတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှာနေနေတယ်ဆိုရင်: porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ချယ်ရီ-ကောက်ယူဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်လေ့လာမှုများ, ဘက်လိုက်မှု, ကွာဟပျက်ကွက်နှင့်ပရိယာယ်အပါအဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု '' 'သုတေသနစာမျက်နှာ "ကို examine ။